Nhau - bhegi mubhokisi kurongedza
Nzira yekusimbisa sei kutonga kwehutano mukushandiswa kwebhegi mubhokisi mumunda wezvokudya?
Bhegi-mu-bhokisi rinoumbwa neBag rine mudziyo wekuburitsa mvura uye bhokisi rine marata kunze. Kuenzaniswa nemaitiro echinyakare ekurongedza, mabhokisi mabhegi ane hupenyu hurefu hwesherufu (bhokisi rewaini, muto wemuchero unogona kuchengetwa bhegi rakavharwa makore 2-3, mushure mekuvhurwa kunogona kuchengetedza 2 mwedzi), zviri nani kudzivirira chiedza uye oksijeni kuramba kuita, ine mashoma kwazvo. zvinhu uye zvinogona kudzokorodza, zvinogona kunge zviri pamichina yekuzadza yakafanana kugadzirisa akasiyana siyana ezvigadzirwa, Inokodzera aseptic / isiri-aseptic / inotonhora yekuzadza / inopisa kuzadza uye mamwe maitiro ekugadzirisa, inogona kuvandudza kuchengetedza nekufambisa. Iko kushandiswa kwebhegi mubhokisi mumunda wechikafu kuri kuwedzera, asi nekuda kwekusangana kwakananga nechikafu chemvura, kuchengetedzeka kwayo kunobata zvakananga kuchengetedzeka kwechikafu, inovawo imwe yeakakosha ekudzora emhando yemabhizinesi ekugadzira chikafu chemvura.
Kuongororwa kwehutano hwemukati webhegi
Vagadziri vekudya kwemvura vanonyatsoyedza kunaka kwebhegi remukati nebhokisi rekunze pakutenga bhegi riri mubhokisi, uye vanozobvunza rondedzero yebvunzo kana uchitenga. Usati washandiswa, iyo fekitori yemhando yekuongorora inoenderera mberi nekuita bvunzo dzekuchengetedza, bvunzo inokodzera, inogona kuenderera kune inotevera nzira yekurongedza chikafu.
1. Air resistance performance test yebhegi remukati
Kuramba gasi kunoreva kuvharidzira mhedzisiro yeBIB yekurongedza zvinhu pane oxygen. Gasi kuramba chinhu chakakosha chinokanganisa kunaka kwezvigadzirwa muhupenyu hwesherufu, uye zvakare yakakosha chirevo chekuongorora hupenyu hwesherufu.
Kana iyo BIB yekurongedza zvinhu isina kusimba gasi kuramba, inotungamira kune oxidation uye kuderera kwezviri mukati nekuda kwekunzwa kune oxygen. Kupokana kwegasi kunoyerwa nehuwandu hwegasi kuburikidza nezvinhu.
2. Inner bag sealing performance test
Kuisa chisimbiso kunoreva kuvimbika kweBIB yekurongedza chisimbiso, kuburikidza nebvunzo inogona kuve nechokwadi kutendeseka kwese chigadzirwa kurongedza chisimbiso, kudzivirira chigadzirwa chekuisa chisimbiso kuita hakuna kunaka, zvichikonzera kuvuza, kusvibiswa, kuparara uye mamwe matambudziko.
Kune nzira dzakawanda dzekuisa chisimbiso bvunzo dzekuita, nzira inonyanya kushandiswa ndeye kushandisa chisimbiso chekuyedza chiridzwa, uchishandisa nzira yekuona, kunyanya tarisa bvunzo yekudzoreredza. Kana iwe uchida kuyedza muhuwandu hwekuisa chisimbiso uye kudonha kwekuita kweBIB kurongedza, unogona kushandisa musimboti wekumanikidza kuvharika kwekuita bvunzo michina.
Ehezve, mushure mekuona kuti gasi kuramba kuita uye kuisa chisimbiso kuita kweBIB kurongedza kwakakodzera, zvinodikanwa zvakare kudzora zvimwe zviratidzo zvakaita sekuisa chisimbiso uye kuita kwekusimba kuti uve nechokwadi chehupenyu hwesherufu uye kuchinjika kwezviri mukati.
Nguva yekutumira: Oct-25-2021